Iindaba - iteknoloji yeRFID iphucule kakhulu inqanaba lolawulo loshishino lokuhlamba
Ithegi ye-RFID PPS yokuhlamba iimpahla
Itekhnoloji yeRFID iphucule kakhulu inqanaba lolawulo loshishino lokuhlamba
Njengoko sonke sisazi, ukusetyenziswa kwe-RFID kwishishini lempahla kuye kwaxhaphaka kakhulu, kwaye kunokuzisa uphuculo olubalulekileyo kwiinkalo ezininzi, okwenza ukuba inqanaba lolawulo lwedijithali liphuculwe kakhulu. Nangona kunjalo, kwiminyaka yakutshanje, ishishini lokuhlamba, elisondele kakhulu kwishishini lempahla, liye lafumanisa ukuba ukusetyenziswa kweteknoloji yeRFID kunokuzisa ezininzi iinzuzo.
Okwangoku, kwishishini lokuhlamba, umsebenzi wolawulo lwedatha uninzi lwenziwa ngesandla. Ngako oko, kaninzi akukho bungqina malunga nokuchaneka kwe-inventory, ukubeka iliso kwi-frequency yokuhlamba yelinen, inani lezonyango ezinzima, kunye nokulahlekelwa kwelinen. Inokulandelwa kwaye izise inkathazo eninzi kubaphathi belinen.
Ngaphambi kokuhlamba ilinen, umzi-mveliso wokuhlamba kufuneka uqonde unyango lokuhlelwa ngokombala, ukuthungwa, udidi lokusetyenziswa, kunye nodidi lokungcola. Ukusetyenzwa ngesandla kudla ngokufuna abantu aba-2 ~ 8 ukuba bachithe iiyure ezininzi ukuhlela iilinen ezahlukeneyo kwiichute ezahlukeneyo, nto leyo etya ixesha.
Ukongezelela, indlela yokulawula ilahleko kwikhonkco lolawulo lwezothutho, indlela yokungenelela xa inani lokunikezela likhulu okanye lincinci; indlela yokubeka esweni izinga longcoliseko olunzima, ibango, ukulandelwa komzimba wangaphandle, kunye nokulandelwa kakubi kwikhonkco lokulandela ilinen; indlela yokubeka iliso kwimisebenzi yokuhlamba, isimo sokuvelisa kunye nelaphu kwikhonkco lolawulo lwedijithali Ukulahleka kwengca kunye nokubeka iliso ixesha elide, izinga lokusetyenziswa kokujikeleza kwelinen, i-inventory yehotele kunye nolawulo lwelinen ye-zombie, njl. zonke iindawo apho i-RFID inokudlala indima.
Kunokuthiwa iteknoloji yeRFID izise utshintsho olutsha kwishishini lokuhlamba. Iithegi zokuhlamba ze-RFID zinokunceda ekuchongeni ixesha lokuhlamba, iimfuno zokuhlamba, ulwazi lwabathengi kunye nokuhlamba rhoqo izinto ezirekhodiweyo, ukunciphisa izinga leempazamo zexesha lomsebenzi wezandla, kunye nokuphucula kakhulu ulawulo olusebenzayo.
Nangona kunjalo, kwizicelo ezisebenzayo, kukwakho ubunzima obuthile, kubandakanya amalaphu, ukupakishwa kwelebhile kunye nokugoba, ukufuma, ubushushu kunye nezinye izinto ezininzi eziya kuchaphazela isiphumo sokufunda selebhile. Nangona kunjalo, ukuze kuhlangatyezwane nemingeni engcono, abavelisi be-RFID baphuhlise ukuguquguquka I-RFID iithegi zokuvasa ezingalukwanga, I-RFID iithegi zokuhlamba iqhosha, iithegi zokuhlamba iimpahla ze-silicone kunye nezinye iithegi zezinto ezininzi, ezifanelekileyo kwiimpahla zelinen ezahlukeneyo, ubushushu bokuhlamba, kunye neendlela zokuhlamba.
Kunokuthiwa iteknoloji yeRFID izise utshintsho olutsha kwishishini lokuhlamba. I-RFID yokuhlamba impahla iithegi inokunceda ekuchongeni ixesha lokuhlamba, iimfuno zokuhlamba, ulwazi lwabathengi kunye nokuhlamba rhoqo izinto ezirekhodiweyo, ukunciphisa izinga lempazamo lexesha lomsebenzi wezandla zemveli, kunye nokuphucula kakhulu ulawulo olusebenzayo.
Nangona kunjalo, kwizicelo ezisebenzayo, kukwakho ubunzima obuthile, kubandakanya amalaphu, ukupakishwa kwelebhile kunye nokugoba, ukufuma, ubushushu kunye nezinye izinto ezininzi eziya kuchaphazela isiphumo sokufunda selebhile. Nangona kunjalo, ukuze kuhlangatyezwane nemiceli mngeni ngcono, abavelisi be-RFID baphuhlise iithegi zokuhlambela ezingalukwanga eziguquguqukayo, iithegi zokuvasa amaqhosha, iithegi zokuvasa i-silicone kunye nezinye iithegi zezinto ezininzi, ezilungele izixhobo zelinen ezahlukeneyo, ubushushu bokuhlamba, kunye neendlela zokuhlamba.
Ixesha lokuposa: Dec-30-2021